auto များဖုံးလွှမ်း | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-fabricbackpacks.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> နေကာအထည်အလိပ် -> auto များဖုံးလွှမ်း
ကျနော်တို့ဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan auto များဖုံးလွှမ်း ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု, ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ရောင်းချသူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်များနှင့်သင်တို့အဘို့အ On-အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကတိပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့ပါပြီ။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုမဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုအကောင်းဆုံးသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကို enable သိရသည်
ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နေစဉ် dispatch အသီးအသီးဇာတ်စင်စဉ်အတွင်းတင်းကြပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအစီအမံကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအောက်အားဖြင့်။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ခရီးစဉ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရောက်လာပြီမှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာမိတ်ဆွေများကိုကြိုဆိုပါတယ်!
ပုံစံ: AF 5-4
Coating နှင့်အတူ 1. က Non-ယက်အထည်အလိပ် & ချုပ်-နှောင်ကြိုးကိုက Non-ယက်အထည်အလိပ်
2. polyester အထည်အလိပ် 75D ~ 300D
3. အထူးအအမည်: ခရမ်းလွန်-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အနာ-resistant, anti-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး, ပုံနှိပ်
4. အရောငျ: အရောင်များ Pantone အရောင်လမ်းညွှန်ကိုလိုကျလြှောကျနိုငျသို့မဟုတ် customized နိုင်ပါသည်။
6. ဇာစ်မြစ်၏နေရာအရပ်: ထိုင်ဝမ်
Auto Covers | Couvertures automatiques | Auto Covers | Авто Обложки | Auto Covers | Copertine Auto | ऑटो कवर | Cubiertas Auto | Auto Covers | أغطية السيارات | Auto Covers | ปกอัตโนมัติ | Meliputi auto | অটো প্রচ্ছদচিত্র | Oto Kapakları | 汽車罩布料 | Auto Covers | Auto Covers | Auto Covers | Auto Covers